ယောဂက စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » Latest Health Informations » ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း » စိတ်ကျန်းမာရေး » ယောဂက စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်စေသလဲ
ယောဂလို့ဆိုလိုက်ရင်ပဲ လူတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကြွက်သားတွေ တိုးလာတာတို့ ပျော့ပျောင်းလာတာတို့ စတဲ့ မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ အကျိုးတွေကိုသာ ပြေးမြင်ကြတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒါတွေဟာ ယောဂကပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးဖို့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။
ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ ယောဂက သင့်ရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက် ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့ သင့်ရဲ့ ဆက်ဆံရေး တွေကို တိုးလာစေတဲ့ အချို့သော ကောင်းကျိုးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ယောဂဟာ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ဒေါသနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းတွေကို လျော့ပါးစေပါတယ်။
ယောဂဟာ စိုးရိမ်မှုတွေကို လျော့ကျစေပြီး စိတ်အေးချမ်းသာစေပါတယ်။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူလိုက်တာနဲ့ပဲ သင့်ရဲ့ အာရုံကြောစနစ်က ချောမွေ့သွားပါတယ်။ ယောဂနဲပပေါင်းလိုက်ရင်တော့ သင်ခံစားနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်မှာပါ။
ဖိအားတွေကို လျှော့ချလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ယောဂီတွေရဲ့ အနေအထားနဲ့ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းတွေဟာ ဒီလို အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ ကိစ္စတွေကို ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့တော့ ယောဂဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာမှုအတွက် ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ရလဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေတာပါပဲ။
သွေးဖိအားလျော့စေခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းလျော့စေခြင်းနဲ့ အသက်ရှူတာကို တိုးတက်လာစေတာတွေနဲ့တင် ယောဂက သင့်ရဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျမှုတွေကို ဈေးကြီးတဲ့ဆေးတွေမပါရဘဲ ဖြေရှင်းပေးလိုက်နိုင်ပါတယ်။
ယောဂဟာ မှတ်ဥာဏ်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုလည်း တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဘဝမှာ သင့်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို အာရုံစိုက်ဖို့ ခဲယဉ်းတဲ့အချိန်တွေကိုလည်း သင်တွေ့နိုငပါတယ်။ ကံကောင်းသစွာနဲ့ပဲ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတဲ့ အကြံဥာဏ်ကို သင်အခုရရှိနိုင်သွားပါပြီ။ ယောဂဟာ မှတ်ဥာဏ်ကို ထိထိရောက်ရောက်တိုးတက်စေနိုင်ပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုတွေကိုလည်း ပိုကောင်းလာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
စိတ်အေးချမ်းစေဖို့နဲ့ စိတ်ရှုပ်တာတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ ယောဂဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ ခေါင်းထဲက ဆူညံသံတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး အတွင်းစိတ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်လိုက်တဲ့အခါ သင်အရာအားလုံးကို မှတ်မိနေတာမျိုးတွေ၊ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုအားကောင်းလာတာတွေကို တွေ့ရမှာပါ။
ယောဂကျင့်ခြင်းအားဖြင့် သင့်ရဲ့တန်ဖိုးတွေကို သင်ကိုယ်တိုင်နားလည်လာနိုင်ပြီး သာယာတဲ့ အချစ်ရေးတွေ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေကို ဖန်တီးနိုင်လာတဲ့အပြင် ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းတွေ တိုးလာတာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ သင့်ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှုတွေတိုးလာပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေပိုလုပ်ပြီး ပိုပြီးကျန်းမာအောင်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
နေ့တစ်နေ့ကုန်ဆုံးသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသင်နဲ့ သင့်ကြားဆက်ဆံရေးကို ပြန်ကြည့်ပါ။ ယုံကြည်မှုတွေ ပိုရှိလာပြီး ဘာတွေခံစားနေရတယ်ဆိုတာကို အာရုံစိုက်လိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်မျှတစွာ ဖွံ့ဖြိုးနေတဲ့ သင့်ကိုယ်သင်ပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ရှင်းပြစရာတွေ ဖုံးကွယ်စရာတွေလည်း မလိုအပ်ပါဘူး။
အရာရာကို ရင်ဆိုင်နိုင်မယ့်အပြင် ဘယ်အရာကမှလည်း သင့်ကို ကြောက်ရွံ့လာစေဖို့ မစွမ်းသာပါဘူး။
သင့်ကိုယ်သင် စေတနာရှိရှိဆက်ဆံလေလေ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေအားလုံးကလည်း သင့်အပေါ် စေတနာနဲ့ ဆက်ဆံလေလေပါပဲ။ လူတွေကိုလည်း သင်က ကရုဏာမျက်လုံးတွေနဲ့ မေတ္တာထားပြီး ကြည့်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ယောဂဟာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုတွေကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
အနိုင်ကျင့်ခံအမျိုးသမီးတွေ၊ စစ်တပ်တွင်းကလူတွေ၊ စစ်တိုက်ထွက်ပြီး ရန်သူတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူတွေမှာ Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)လို့ခေါ်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဝေဒနာရှင်တွေဟာ အိပ်မက်ဆိုးတွေ၊ အတိတ်အကြောင်းတွေနဲ့ အချို့သော လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
အချို့သော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးတွေဟာ PTSD ရဲ့ အခြေခံအချက်တွေကို ညွှန်းဆိုနီုင်ပြီး အနားကပ်လာတဲ့သူတွေကို ခုခံနေတဲ့လူနာအချို့လည်းရှိပါတယ်။ အမေရိကန် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးတွေနဲ့ ခေတ်မီဆေးပညာတွေ မနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ ဟဿယောဂ (Hatha Yoga) ဟာ PTSD ရဲ့ လက္ခဏာတွေကို လျော့ကျစေနိုင်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ယောဂဟာ လူနာတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အားနည်းချက်တွေ၊ စိတ်အားငယ်မှုတွေကို ကုသပေးတဲ့နေရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။
သင့်အမျိုးသမီး ယောဂလုပ်နေစဉ် မပြောသင့်သည့်စကားများ
သင်က ယောဂလေ့ကျင့်ဖို့အတွက် သင့်လျော်တဲ့သူလား
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မေ 25, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မေ 25, 2018
How Yoga Helps Empower Women.
http://yoga.org.nz/blog/2015/how-yoga-helps-empower-women/ Accessed October 1st, 2016.
HIV နှင့် သတိပြုဖွယ်များ